Inona No Mitranga Rehefa Mahazo Herinandro Lavabe Ho Fialantsasatra i Japana? · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny فارسی, Italiano, 日本語, русский, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Herinandro Volamena tao Amin'ny toby fiantsonana Osaka JR, 4 May 2007, sary an'i Chris Gladis. CC 2.0.
Mifamahofaho ny fihetsehampo rehefa mifarana ny “Herinandro Volamena”,fialantsasatra lava be tao Japana. Ny sasany malahelo hiverina hiasa, raha ny hafa indray faly fa mivoaka ny trano ny fianakaviana ary miverina ho toy ny isanandro ny fiainana.
Fitambaran'ireo fialantsasatra mitontona amin'ny faran'ny Aprily sy ny fiantombohan'ny May ny Herinandro Volamena ao Japana, ary marobe ny Japone no mahazo herinandro tsy hiasàna. Ho an'ny 2015, nanomboka ny 29 Aprily ilay “herinandro”.
Nanomboka tamin'ny naha-zava-mahazatra ny ankamaroan'ny olona ao Japana ny fandehanana miala sasatra aminà fotoana mitovy, ny fiantombohana sy fiafaràn'ny Herinandro Volamena dia midika fivoahan'olona marobe eny an'arabe, eny anaty fiarandalamby, eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ny fiafaràn'ny Herinandro Volamena, fantatra amin'ny hoe hazakazaka “U-Turn” (ny kihon-dàlana farany), satria an-tapitrisa ireo olona mandeha miverina mody, no lohahevitra iray tena ankafizin'ireo mpamoaka vaovao:
[Maribolana] Ny andro farany amin'ny Herinandro Volamena: miteraka firohotan'olona marobe mivoaka avy amin'ireo seranam-piaramanidina sy toby fiantsonan'ny fiarandalamby ny hazakazaka U-Turn.
Mandritry ny taona dia ny Herinandro Volamena no fialantsasatra lava indrindra tena ankafizina ao Japana amin'ny ankapobeny. Tsy toy ireo fialantsasatra hafa nitarina, toy ny Taombaovao amin'ny fiandohan'ny Janoary sy ny O-Bon, ilay fetibe ho an'ny maty rehefa tapaky ny volana Aogositra, izay fotoam-pihaonana ho an'ireo fianakaviana midadasika, fa azo ankalazaina amin'izay itiavanao azy ny Herinandro Volamena.
Tany amin'ny vanimpotoana taorian'ny ady no nipoiran'ny Herinandro Volamena, natao ho fomba iray hahafahan'ireo any andrenivohitra mandeha miverina any ambanivohitra mba hanampy amin'ny fambolena vary any amin'ireo toeram-pambolena kelin'ny fianakaviana. Na amin'izao andro izao aza, raha ny zava-misy, dia mbola mibahana toerana hatrany ao Japana ny tontolon'ny fambolena madinidinika:
Tamin'ity Herinandro Volamena ity, nandeha namboly vary aho. Tratrako ny tanjoko… (^o^;)
Kenefa, ho an'ny olona maro ao Japana, farafahakeliny ny Herinandro Volamena dia midika herinandro iray hialàna lavitra ny asa aman-draharaha. Toy ny olon-drehetra, dia mahakamokamo ny Japone ny fiverenana miasa aorian'ny fialantsasatra lavabe tahaka izany:
TAPITRA NY HERINANDRO VOLAMENA
Mazava ho azy, eo ny olona ateraky ny fahafenoan'ny vata fandraisana hafatra:
Ny tena zava-misy ahitàna fa tapitra ny Herinandro Volamena dia rehefa mahamarika aho fa misy hafatra 1.158 tsy voavaky ao anaty vata fandraisako.
Amin'ny lafiny iray, maivamaivana ery ny olona sasany hiverina amin'ny fitsotsòran'ny fiainany isanandro:
Tapitra ihany nony farany ny Herinandro Volamena. Lasa niverina niasa ny vadiko, ary niverina any amin'ny akanin-jaza ny ankizy. Afaka mba mandeha misaika am-pilaminana ihany aho lahy.
Toa maneso sy lasa loharanonà rarin-tsaina indray ny fahafahana misitraka fotoana lavabe tsy fiasàna :
Tapitra ihany nony farany ny Herinandro Volamena. Nampiasain'ny vadiko ihany koa ny sasany tamin'ny fotoana fialàny sasatra mba hakàna andro sivy itsaharana, ary dia mivoaka foana no lahasany mandritry ny andro. Fifaliana re izany. Tany ampiandohana dia hoy izy “manana sivy andro misesy be izao aho hitsaharana!” saingy teny an-tenantenany teny dia nanjary lasa fanisàna andro nankarary an-doha: “3 andro sisa tavela… 2 andro sisa tavela.” Izany eo ihany, tsy maintsy miomana hamonjy ny asa tapak'androko aho. Miverina ho amin'ny andavanandro ny fiainana ho an'ny sisa rehetra taminay.
Ho an'ireo mpikarakara tokantrano, mety hidika tanteraka fitomboan'ny asa bebe kokoa ny Herinandro Volamena :
Tapitra ihany nony farany ny Herinandro Volamena. Raha vao niandoha ny Herinandro Volamena dia efa tazo 38° no nentin'ny vadiko, ary tao am-pandriana no nandaniany ny tapaky ny fialantsasatra. Laniko tamin'ny fikarakaràna azy sy fanarahana maso ny zanakay vavy ny fotoanako manontolo. Reraka kokoa noho ny andavanandro aho. (ｰ ｰ;) *offff* tiako raha mba voan'ny tazo aho dia ho afaka mitsotsòtra am-pandriana mandritry ny andro efatra, saingy tsy misy resaka mihitsy ny amin'izany.
Tsy ny tsirairay no faly nahita ny fiafaràn'ny Herinandro Volamena.
Androany izahay nankalaza ny fiafaran'ny Herinandro Volamena tamin'ny fankalazana ny andro nahaterahan'ny vadiko. Nandeha nivoaka tany amin'ny Korean BBQ – safidiny, na dia efa aman-taoniny aza ny BBQ laninay ny omalin'io. Izay ilay vadiko izay.☆
Ny sasany efa miandrandra sahady ny fialantsasatra lavabe manaraka, ny “Herinandro Volafotsy”, amin'ny Septambra.
Rahatoa mifarana ny Herinandro Volamena, aza matahotra! Efa manangasanga any ny Herinandro Volafotsy!